Masjid Minneapolis ku yaal oo dad intay Salaad Subax tukadeen, fafadhiyaan - BAARGAAL.NET
Ila Qosol sheeko
Masjid Minneapolis ku yaal oo dad intay Salaad Subax tukadeen, fafadhiyaan
✔ Admin on June 22, 2010 0 Comment
Masjid Minneapolis ku yaal oo dad intay Salaad Subax tukadeen, fafadhiyaan, baa waxa si kedis ah kusoo galay Gaal Ameerikaan ahoo middi weyn sita. Dadkii Salaadda tukaday buu weydiiyey: Qof Muslin ahi ma idinku jiraa?. Dadkii way wada baqeen, laakiin hal nin oo geesi ahaa baa yiri: Aniga ayaa Muslin ah. Gaalkii baa ku ...yiri: Dibadda ma iigu soo bixi kartaa?. Kolkii dibadda loo baxay buu ku yiri:
Waxan wataa Wan aan doonayo in qaabka Muslimiintu xoolaha u gawracdaan aad iigu Gawracdo iiguna Maqaar bixiso. Muslinkii Wankii inta uu gawracay buu Gaalkii ku yiri: Anigu waan kuu Gawracaye cid kuu Maqaar bixisa raadso. Gaalkii baa Masjidkii ku laabtay isaga oo middidii oo dhiig ka da'ayo sita. Dadkii ayuu weydiiyey: Qof kale oo Muslin ahi ma ... See Moreidinku jiraa?. Dadkii oo dhan baa hal mar Imaamkii Masjidka farta ku fiiqay. Imaamkii oo jaraynayaa waxa uu yiri: War miyaad waalateen?. Ma labada Rakco een idin tujiyey baan Muslin ku noqday?.